အကြပ်အတည်း အမျိုးမျိုးကို ( ၇ ) ရက် အတွင်း လွတ်မြောက်စေ နိုင်တဲ့ အဓိဌာန်…. - Mega Wave
ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ ထူးခြားအံ့သြဖွယ် ၉ ပါး
အသက် ၄၀ ကျော်သူများအတွက် ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီအားဖြည့်ဆေး
စီးပွား ဥစ္စာ ဓန ကြွယ်ဝ စေရန် မဟာလာဘံ လာဘ်ဖွင့် ကန်တော့ပွဲ ထိုးနည်း
သီလ ၄-မျိုးနှင့် သီလအစွမ်း သိကောင်းစရာ
နမောငါးချက် စီးပွားတက်ဂါထာတော် နှင့် ပုတီးစိပ်နည်း
အကြပ်အတည်း အမျိုးမျိုးကို ( ၇ ) ရက် အတွင်း လွတ်မြောက်စေ နိုင်တဲ့ အဓိဌာန်….
အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ
အကြပ်အတည်း အမျိုးမျိုးကို ( ၇ ) ရက် အတွင်း လွတ်မြောက်စေ နိုင်တဲ့ အဓိဌာန်
တနင်္ဂနွေနေ့ ကနေ စပြီး အဓိဌာန် ဝင်ပါ ။
တနင်္ဂနွေနေ့.. တနင်္ဂနွေ ထောင့် မေတ္တာသုတ်တော် ၆ ခေါက် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ဖွားမြတ်စွာဘုရားရှင် အပေါင်းကို ရည်မှန်းပြီး ကန်တော့ပါ ။
မိမိ ကုသိုလ် အလုပ်အားလုံး ပြီးစီးသည့် အခါတနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ်နတ်မင်းကြီးကို အမှုးထားပြီး ဝေနေယျ တို့ကိုမေတ္တာပို့ အမျှေဝေပါ ။
တနင်္လာနေ့ သောကြာထောင့် မေတ္တာသုတ်တော်၂၁ ခေါက် ၊ သောကြာနေ့ ဖွားမြတ်စွာဘုရားရှင် အပေါင်းကို ရည်မှန်းပြီး ကန်တော့ပါ ။ မိမိ ကုသိုလ် အလုပ်အားလုံး ပြီးစီးသည့် အခါတနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ်နတ်မင်းကြီးကို အမှုးထားပြီး ဝေနေယျ တို့ကိုမေတ္တာပို့ အမျှေဝေပါ ။
စသည်ဖြင့် အထက်ပါ အတိုင်း အတိုချုံးခွင့် ပြုပါ ခင်ဗျာ အင်္ဂါနေ့ ရာဟုထောင့် မေတ္တာသုတ်တော် ၁၂ ခေါက် ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကြာသာပတေးထောင့်၊ မေတ္တာသုတ်တော် ၁၉ ခေါက်၊
ကြာသပတေးနေ့..စနေထောင့်.၊ မေတ္တာသုတ်တော်၁၀ ခေါက် ၊ သောကြာနေ့…ဗုဒ္ဓဟူးထောင့် ၊ မေတ္တာသုတ်တော်..၁၇ ခေါက် ၊စ နေနေ့ အင်္ဂါထောင့် ၊ မေတ္တာသုတ်တော် ၈ခေါက် ၊
တနင်္ဂနွေနေ့ တနင်္လာထောင့် မေတ္တာသုတ်တော် ၁၅ ခေါက် ။ မေတ္တာသုတ်တော် အဓိဌာန် ပြီးပါပြီ ။ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ တနင်္ဂနွေထောင့်ကနေ စပြီး အဓိဌာန် ဝင်လာခဲ့ တာပါ ။
တနင်္ဂနွေနေ့ မှာပဲတနင်္လာထောင့်မှာ အဓိဌာန် ပထမအဆင့် ပြီးသွားတာပါ ။ လုပ်နိုင်ရင် ဆက်တိုက် ထိုနေ့မှာပဲ မောရသုတ်တော်ကို အထက်ပါ အတိုင်းပဲ တနင်္ဂနွေထောင့်ကနေ စပြီး အဓိဌာန် ဆက်ဝင် သွားပါမယ် ။
အထက်က ရေးပေးထားသည့် အစဉ်အတိုင်းပဲ မေတ္တာသုတ်တော် နေရာမှာ မောရ သုတ်တော်ကို အစားထိုး ရွတ်ဖတ်သွားပြီး ဆိုင်ရာ နေ့ဖွား ဘုရားရှင် တွေကိုလည်း နည်းတူ ကန်တော့ဆိုင်ရာ ဂြိုဟ်မင်းတွေကိုလည်း ထုံးစံအတိုင်း အမျှပေးဝေပြီး ဆက်တိုက် ဆက်သွားပါ ။
ရွတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ မိမိသည် တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် ဘုရားစေတီကို လက်ဝဲရစ် လှည့်ပြီး ပူဇော်သွားနေတာကို သတိပြု မိလာနိုင် ပါတယ် ။
ဒီ အဓိဌာန်ကို တစ်ကယ် အခက်အခဲ ကြုံနေသူများသာ လုပ်သင့် ပါတယ် ။ ( အလုပ်အကိုင် ပိုမိုကောင်းချင်လို့ ငွေပိုဝင် ချင်လို့ အစရှိသဖြင့် လောဘဖြင့် လုံးဝ မလုပ်သင့်ပါ ။ )
ဟိုတစ်ခါကျွန်တော် တင်ပေးဖူးသည့် အလုပ်အကိုင် ရရှိစေသည့် အဓိဌာန်မျိုး ကဲ့သို့ မဟုတ်ပါ ။ အဲဒီ့ အဓိဌာန်ကတော့ အလုပ်မရှိလုိ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ပို ကောင်းချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဝင်နိုင်လေကောင်း လေပါပဲ ။
ဒီ အဓိဌာန်ကတော့ တစ်ကယ် အကျပ်အတည်း ဆိုက်ပြီး ပြဿနာပေါင်းစုံ တက်နေသည့် အခြေအနေမျိုး ရောက်နေသည့် သူတွေ အတွက် သီးသန့်ဖြစ် ပါတယ် ။ ပိုမို ထက်မြက်ချင်သူများ သန့်ရှင်းရေး ကုသိုလ်လေးနဲ့ တွဲပြီးလုပ်ပါ ။
ကံကြွေးဝဋ်ကြွေး မဟုတ်ခဲ့ ရင်တော့ သိသိသာသာကိုပဲ အဓိဌာန် ပြည့်မြောက်ပြီး တစ်ပတ်ခန့် အတွင်းမှာကို .. အခက်အခဲများ ပြေလျော့သွားတတ် ပါတယ်ခင်ဗျား ။
လက်တွေ့လည်း လူအများကို ကျွန်တော် ညွှန်ပေးနေသည့် အဓိဌာန်ဝင်နည်း လေးသာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒုက္ခ သုက် ခသိပ်ရောက်လာရင်
ဘုရားမှတစ်ပါး ကိုးကွယ်ရာမရှိ ၊ တရားမှ တစ်ပါး ကိုးကွယ်ရာ မရှိ၊ သံဃာမှ တစ်ပါး ကိုးကွယ်ရာ မရှိပါခင်ဗျား ။ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရနိုင်သလို တစ်ကယ်ဖြစ်ချင် တစ်ကယ်လုပ်နိုင်ဖို့သာ လိုအပ်ပါကြောင်း အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းတို့မှ လွတ်မြောက်ကြ ပါစေ သတည်း ။
ဤ ပညာဒါန ကုသိုလ်သည် ဖြစ်လေရာ ဘဝတိုင်းတွင် တပည့်တော်အား အခက်အခဲအကျပ်အတည်း ဆိုက်ရောက်သည်တိုင်းတွင် များမကြာမီ လွတ်မြောက်စေသည့် အထောက်အပံ့ကောင်း ဖြစ်ပါစေ..သတည်း ။
လေးမြတ်စွာဖြင့် ကိုဖုန်း။ သုတေသီဝေသာလီမောင်ဖုန်း။ ကိုစိုးမိုးထွန်း (ဗေဒင်ပညာသုတေသီ)
အကွပျအတညျး အမြိုးမြိုးကို ( ၇ ) ရကျ အတှငျး လှတျမွောကျစေ နိုငျတဲ့ အဓိဌာနျ
တနင်ျဂနှနေေ့ ကနေ စပွီး အဓိဌာနျ ဝငျပါ ။
တနင်ျဂနှနေေ့.. တနင်ျဂနှေ ထောငျ့ မတ်ေတာသုတျတျော ၆ ခေါကျ ၊ တနင်ျဂနှနေေ့ ဖှားမွတျစှာဘုရားရှငျ အပေါငျးကို ရညျမှနျးပွီး ကနျတော့ပါ ။ မိမိ ကုသိုလျ အလုပျအားလုံး ပွီးစီးသညျ့ အခါတနင်ျဂနှေ ဂွိုဟျနတျမငျးကွီးကို အမှုးထားပွီး ဝနေယြေ တို့ကိုမတ်ေတာပို့ အမြှဝေပေါ ။
တနင်ျလာနေ့ သောကွာထောငျ့ မတ်ေတာသုတျတျော၂၁ ခေါကျ ၊ သောကွာနေ့ ဖှားမွတျစှာဘုရားရှငျ အပေါငျးကို ရညျမှနျးပွီး ကနျတော့ပါ ။ မိမိ ကုသိုလျ အလုပျအားလုံး ပွီးစီးသညျ့ အခါတနင်ျဂနှေ ဂွိုဟျနတျမငျးကွီးကို အမှုးထားပွီး ဝနေယြေ တို့ကိုမတ်ေတာပို့ အမြှဝေပေါ ။
စသညျဖွငျ့ အထကျပါ အတိုငျး အတိုခြုံးခှငျ့ ပွုပါ ခငျဗြာ အင်ျဂါနေ့ ရာဟုထောငျ့ မတ်ေတာသုတျတျော ၁၂ ခေါကျ ၊ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ကွာသာပတေးထောငျ့၊ မတ်ေတာသုတျတျော ၁၉ ခေါကျ၊
ကွာသပတေးနေ့..စနထေောငျ့.၊ မတ်ေတာသုတျတျော၁၀ ခေါကျ ၊ သောကွာနေ့…ဗုဒ်ဓဟူးထောငျ့ ၊ မတ်ေတာသုတျတျော..၁၇ ခေါကျ ၊စ နနေေ့ အင်ျဂါထောငျ့ ၊ မတ်ေတာသုတျတျော ၈ခေါကျ ၊
တနင်ျဂနှနေေ့ တနင်ျလာထောငျ့ မတ်ေတာသုတျတျော ၁၅ ခေါကျ ။ မတ်ေတာသုတျတျော အဓိဌာနျ ပွီးပါပွီ ။ တနင်ျဂနှနေမှေ့ာ တနင်ျဂနှထေောငျ့ကနေ စပွီး အဓိဌာနျ ဝငျလာခဲ့ တာပါ ။
တနင်ျဂနှနေေ့ မှာပဲတနင်ျလာထောငျ့မှာ အဓိဌာနျ ပထမအဆငျ့ ပွီးသှားတာပါ ။ လုပျနိုငျရငျ ဆကျတိုကျ ထိုနမှေ့ာပဲ မောရသုတျတျောကို အထကျပါ အတိုငျးပဲ တနင်ျဂနှထေောငျ့ကနေ စပွီး အဓိဌာနျ ဆကျဝငျ သှားပါမယျ ။
အထကျက ရေးပေးထားသညျ့ အစဉျအတိုငျးပဲ မတ်ေတာသုတျတျော နရောမှာ မောရ သုတျတျောကို အစားထိုး ရှတျဖတျသှားပွီး ဆိုငျရာ နဖှေ့ား ဘုရားရှငျ တှကေိုလညျး နညျးတူ ကနျတော့ဆိုငျရာ ဂွိုဟျမငျးတှကေိုလညျး ထုံးစံအတိုငျး အမြှပေးဝပွေီး ဆကျတိုကျ ဆကျသှားပါ ။
ရှတျရငျးဖတျရငျးနဲ့ မိမိသညျ တဈရကျပွီး တဈရကျ ဘုရားစတေီကို လကျဝဲရဈ လှညျ့ပွီး ပူဇျောသှားနတောကို သတိပွု မိလာနိုငျ ပါတယျ ။
ဒီ အဓိဌာနျကို တဈကယျ အခကျအခဲ ကွုံနသေူမြားသာ လုပျသငျ့ ပါတယျ ။ ( အလုပျအကိုငျ ပိုမိုကောငျးခငျြလို့ ငှပေိုဝငျ ခငျြလို့ အစရှိသဖွငျ့ လောဘဖွငျ့ လုံးဝ မလုပျသငျ့ပါ ။ )
ဟိုတဈခါကြှနျတျော တငျပေးဖူးသညျ့ အလုပျအကိုငျ ရရှိစသေညျ့ အဓိဌာနျမြိုး ကဲ့သို့ မဟုတျပါ ။ အဲဒီ့ အဓိဌာနျကတော့ အလုပျမရှိလုိ့ပဲ ဖွဈဖွဈ အလုပျပို ကောငျးခငျြလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ ဝငျနိုငျလကေောငျး လပေါပဲ ။
ဒီ အဓိဌာနျကတော့ တဈကယျ အကပျြအတညျး ဆိုကျပွီး ပွဿနာပေါငျးစုံ တကျနသေညျ့ အခွအေနမြေိုး ရောကျနသေညျ့ သူတှေ အတှကျ သီးသနျ့ဖွဈ ပါတယျ ။ ပိုမို ထကျမွကျခငျြသူမြား သနျ့ရှငျးရေး ကုသိုလျလေးနဲ့ တှဲပွီးလုပျပါ ။
ကံကွှေးဝဋျကွှေး မဟုတျခဲ့ ရငျတော့ သိသိသာသာကိုပဲ အဓိဌာနျ ပွညျ့မွောကျပွီး တဈပတျခနျ့ အတှငျးမှာကို .. အခကျအခဲမြား ပွလြေော့သှားတတျ ပါတယျခငျဗြား ။
လကျတှလေ့ညျး လူအမြားကို ကြှနျတျော ညှနျပေးနသေညျ့ အဓိဌာနျဝငျနညျး လေးသာ ဖွဈပါတယျ ။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျလညျး ဒုက်ခ သုကျ ခသိပျရောကျလာရငျ
ဘုရားမှတဈပါး ကိုးကှယျရာမရှိ ၊ တရားမှ တဈပါး ကိုးကှယျရာ မရှိ၊ သံဃာမှ တဈပါး ကိုးကှယျရာ မရှိပါခငျဗြား ။ ကိုယျလုပျမှ ကိုယျရနိုငျသလို တဈကယျဖွဈခငျြ တဈကယျလုပျနိုငျဖို့သာ လိုအပျပါကွောငျး အခကျအခဲ အကပျြအတညျးတို့မှ လှတျမွောကျကွ ပါစေ သတညျး ။
ဤ ပညာဒါန ကုသိုလျသညျ ဖွဈလရော ဘဝတိုငျးတှငျ တပညျ့တျောအား အခကျအခဲအကပျြအတညျး ဆိုကျရောကျသညျတိုငျးတှငျ မြားမကွာမီ လှတျမွောကျစသေညျ့ အထောကျအပံ့ကောငျး ဖွဈပါစေ..သတညျး ။
လေးမွတျစှာဖွငျ့ ကိုဖုနျး။ သုတသေီဝသောလီမောငျဖုနျး။ ကိုစိုးမိုးထှနျး (ဗဒေငျပညာသုတသေီ)
← အိမ်မှာအထိအခိုက်တခုခု မရှိရအောင် ပဋ္ဌာန်းရွတ်မိတိုင်း ဒီလိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ
သရဏဂုံ သုံးပါးကို အမြဲမပျက်ရွတ်ဆိုပွားများသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ ရရှိနိုင်သောအကျိုးတရားများ →
အသက်ရှည်ရှည်နေချင်ရင် ဇလားဗီးယားငါးကို လုံးဝမစားပါနဲ့ မသိသေးတဲ့သူတွေ အတွက်လည်းမျှဝေပေးကြပါဦး
၇ရက်သားသမီးများအတွက် 6.7.20မှ 12.7.20 အထိ ရက်စိပ် ဟောစာတမ်း
ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ မြေအောက်ခန်းထဲက အမျိုးအမည်မသိသတ္တဝါရုပ်ကြွင်းများ
Copyright © 2020 Mega Wave. All rights reserved.